विश्वकै बहुमुल्य रातो रंगको केरा ! यस्ता छन् फाइदाहरु ! | सुदुरपश्चिम खबर
frommandu.com बाट साभार
काठमाडौं – प्रकृतिले हामिलाई धेरै अनौठा चिजहरु दिएको छ ।
ती सबै चिजहरु बारे हामिलाई थाहा पनि हुँदैन ।
हामिले केरा देखेकै छौ र खाएका पनि छौ ।
केराको रंग हरियो र पहेलो हुने गर्छ । तर के तपाईले रातो रंगको केरा देख्नु भएको छ रु अष्ट्रेलियामा रातो रंगको केरा पाइन्छ ।
अष्ट्रेलियामा उत्पादन हुने यो केरालाई रेड डका पनि भन्ने गरिन्छ ।
यो केरा अष्ट्रेलियामा मात्र होइन वेस्टइीन्डज, मेक्सिको, जमैका, इक्वाडोर मा पनि लोकप्रिय छ ।
यो केरा विश्वमा नै निर्यात हुने गर्छ ।
तपाईलाई थाहाँ छ, यो केरा भारतको केरलामा पनि पाइन्छ ।
केराले मुटु र डायबेटिज रोग भएका मानिसहरुका लागि राम्रो मानिन्छ ।
यसमा भिटामिन सी हुन्छ । १० क्यालोरी हुन्छ ।
सामान्य तरिकाको स्वाद हुने यो केरा स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक मानिन्छ ।
यौन जीवन खुसी राख्न जान्नैपर्ने कुरा
साथै यो पछिल्लो समय मनोरञ्जनको एक माध्यमको रुपमा बढ्दै गएको छ । यौ’नमा आनन्द लिनकाका लागि केही उपायहरु अपनाउन आवश्यक छ । यौ’न स’म्पर्कलाई जति लामो र आनन्ददायी बनाउन सकिन्छ त्यतिनै पार्टनरबीचको सम्बन्धपनि बन्न जान्छ । त्यसैले यौ’न स’म्पर्कका लागि केही कुरा जान्न आवश्यक छ ।
यौ’न साथी ओच्छ्यानमा आउनुभन्दा अघि नै आफू तयार भएर बस्नुहोस्। जस्तो कि नुहाउने, मन्द सेन्ट छर्कने आदी यौ’नस’म्पर्कलाई एउटा अत्यावश्यक कर्मका रूपमा लिनुहोस्। खुलेर कुराकानी गर्नुहोस्। एक–अर्काको अनुभव साटासाट गर्नुहोस्, जसले गर्दा यौ’न क्रि’याकलाप मस्तिष्कबाटै सक्रिय होस्।
कतिपय महिला–पुरुष मु’खमै’थुन रुचाउँछन् भने त्यो हुनु नराम्रो होइन, तर सरसफाइमा पर्याप्त ध्यान पु¥याउनु जरुरी हुन्छ। यदि साथीलाई यस्तो व्यवहार मन पर्दैन भने प्रयोग नगरकै राम्रो हुन्छ। हतारमा गरिएको स’म्पर्कले दुवै जनालाई च’रम आनन्द नआउन सक्ने भएका कारण समय लिएर दुबै जनालाई आ’नन्द आउने गरि स’म्पर्क गर्नुहोस् । जसले यौ’नसुख त मिल्छ नै दाम्पत्य जीवन पनि सफल हुन्छ ।